Xafiisyadii KULMIYE ee Woqooyiga Ameerika oo la xidhay, Hoggaanka Sare oo ka indha-saabtay Khilaafka jira iyo Masuuliyiin Is Casishay. |
Xafiisyadii KULMIYE ee Woqooyiga Ameerika oo la xidhay, Hoggaanka Sare oo ka indha-saabtay Khilaafka jira iyo Masuuliyiin Is Casishay.
Waxa gebi ahaanba albaabada loo laabay inta badan xafiisyadii uu Xisbiga Kulmiye ku lahaa Woqooyiga Ameerika, gaar ahaan labada dal ee Maraykanka iyo Canada, kaddib markii ay xilalkii iska casileen qaar ka mid ah masuuliyiintii ugu sarreysay ee hawlahaas u qaabilsanaa Xisbiga.
dHaddaba, waxa maanta isaguna xilkii uu hayey iska casilay oo warbaahinta la soo xidhiidhay masuul xisbiga Kulmiye u qaabilsan Abaabulka iyo Wacyi-gelinta gobollada Bari ee dalka Maraykanka oo lagu magacaabo Warsame Xaaji Cabdi oo fadhigiisu yahay magaalada San Fransisco ee gobolka California.
Warsame Xaaji Cabdi
Guddoomiyaha Abaabulka iyo Wacyigelinta Maraykanka